बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा | Washington State Department of Health
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा
पछिल्लो पटक मे २०, २०२२ मा संशोधन गरिएको
5 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसका लागि COVID-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध छ ।5देखि 17 वर्षका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीले Pfizer खोप मात्र लगाउन पाउँछन् । यस समयमा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूका लागि COVID-19 विरुद्धको अन्य कुनै पनि खोपलाई स्वीकृति छैन ।
खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिता
तपाईंले आफ्नो बच्चालाई COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउनुभयो भने:
COVID-19 सङ्क्रमण हुने जोखिम कम हुन्छ
COVID-19 सङ्क्रमण भइहाले पनि सिकिस्त बिमारी पर्ने सम्भावना कम हुन्छ
COVID-19 का कारण अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने र मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ
COVID-19 को अन्य भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउँछ
समुदायमा COVID-19 बाट सुरक्षित रहेका मान्छेको सङ्ख्या बढ्छ, जसले गर्दा रोग सजिलै फैलन पाउँदैन
समुदाय स्तरमा COVID-19 को सङ्क्रमण फैलन नदिएर स्कुलमा उपस्थित भएर गरिने पठनपाठन र अन्य क्रियाकलापमा अवरोध आउन दिँदैन
5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिका
5 वर्षदेखि 11 वर्षका झन्डै 3,100 बालबालिकाले (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) क्लिनिकल ट्रायलअन्तर्गत COVID-19 विरुद्धको Pfizer खोप लगाएका छन् । यसको अध्ययन जारी छ र यस क्रममा कुनै पनि गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छैन ।
5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिका र 16 वर्षदेखि 25 वर्षका मान्छेले खोप लगाउँदा प्रतिरक्षा प्रणालीले देखाउने प्रतिक्रियाका बिचमा तुलना गरिएको थियो ।
यो खोप5वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकामा COVID-19 रोकथाम गर्न 91% प्रभावकारी पाइएको थियो ।
12 वर्षदेखि 15 वर्षका बालबालिका
12 वर्षदेखि 15 वर्षका 2,260 बालबालिकाले (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएका क्रमरहित प्लेसेबो-नियन्त्रित क्लिनिकल ट्रायलमा भाग लिएका थिए ।
तीमध्ये 1,131 जना किशोरकिशोरीले खोप लगाए र 1,129 जनाले सलाइन प्लेसेबो लगाए । आधाभन्दा बढी सहभागीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने प्रयोजनका लागि दोस्रो डोज लगाएको दुई महिनासम्म फलोअप गरिएको थियो ।
खोप लगाउने अनुमति
5 वर्षदेखि 15 वर्षका बालबालिकाका लागि Emergency Use Authorization (EUA, आपत्कालीन प्रयोग अनुमति) बमोजिम Pfizer खोप उपलब्ध छ र यो खोप 16 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका लागि भने पूर्ण रूपमा स्वीकृत भइसकेको छ ।
Food and Drug Administration (FDA, खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग) ले EUA का सहायताले सङ्कटकाल घोषणा गरिएको अवस्थामा कुनै उत्पादनले पूर्ण रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुअघि उक्त उत्पादन प्रयोग गर्ने अनुमति दिन्छ । आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिनुको उद्देश्य भनेको लामो समयको डेटा विश्लेषण गर्नुअघि नै जीवन बचाउने खोप उपलब्ध गराउनु हो । EUA पनि स्वास्थ्य डेटाको राम्रोसँग समीक्षा गरेपछि मात्र प्रदान गरिन्छ । तर यो समीक्षा छोटो समयको अवधिमा गरिन्छ ।
FDA ले प्रदान गरेको EUA का सम्बन्धमा Centers for Disease Control and Prevention (रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) को Advisory Committee on Immunization Practices (खोपसम्बन्धी सल्लाहकार समिति) (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) र Western States Scientific Safety Review Workgroup (पश्चिमी राज्यमा वैज्ञानिक सुरक्षाको समीक्षा गर्ने कार्य समूह) ले आफ्नो मत व्यक्त गर्छन् ।
म किन मेरो बच्चालाई COVID-19 लाग्छ कि भनी चिन्तित हुनु पर्छ ?
विश्वमहामारीको सुरुवात भएदेखि अमेरिकाका 12 मिलियनभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई COVID-19 लागेको छ । युवाहरूका लागि COVID-19 को सुरुवाती भेरिएन्टभन्दा नयाँ भेरिएन्टहरू झन् धेरै खतरनाक र सङ्क्रामक छन् र यसले गर्दा COVID-19 को कारणले अस्पताल भर्ना हुने युवाहरूको सङ्ख्या चरम सीमामा पुगेको थियो ।
वयस्कमा भन्दा बालबालिकामा COVID-19 को असर प्रायः कम हुने भए तापनि बालबालिका यो रोगका कारण गम्भीर बिरामी पर्ने र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका साथीभाइ र परिवारलाई यो रोग सार्ने जोखिम भने कायमै रहन्छ ।
COVID-19 को सङ्क्रमण भएका बालबालिकामा "दीर्घकालीन COVID-19" हुन वा झुक्किने वा अलमलिने, थकान हुने, टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू लामो समयसम्म देखिन सक्छन् । बच्चाहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ्य राख्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका खोप लगाउनु नै हो ।
COVID-19 सङ्क्रमित बालबालिकाहरूमा मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम (MIS-C) (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) हुने निकै जोखिम हुन्छ । MIS-C भएका व्यक्तिको मुटु, फोक्सो, मिर्गौला, मस्तिष्क, छाला, आँखा वा आन्द्रा जस्ता विभिन्न अङ्ग सुनिन्छ र पोल्छ । MIS-C के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा अझै पत्ता नलागेको भए तापनि MIS-C भएका धेरै बालबालिकालाई पहिले COVID-19 भएको वा उनीहरू COVID-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको पाइएको छ । MIS-C निकै गम्भीर हुन सक्छ र यसले ज्यान पनि लिन सक्छ । तर यो समस्या देखिएका धेरैजसो बालबालिकाले स्वास्थ्य स्याहार प्राप्त गरेपछि सन्चो भएको छ ।
K-12 स्कुलमा भर्ना पाउन खोप लगाएको हुनु पर्छ ?
मैले खोपको शुल्क तिर्नु पर्छ ?
अहँ । तपाईंको बच्चाले निःशुल्क रूपमा खोप लगाउन पाउँछ । सङ्घीय सरकारले खोपको पूरा शुल्क भुक्तानी गर्छ ।
तपाईंले सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य बीमा गराउनुभएको छ भने तपाईंको खोप प्रदायकले तपाईंको बीमा कम्पनीलाई खोप शुल्कबापत बिल पठाउन सक्छ। तपाईंले बीमा गराउनुभएको छैन भने सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत खोप लगाउने प्रदायकलाई भुक्तानी गरिन्छ ।
तपाईंले COVID-19 विरुद्धको खोप लगाएबापत शुल्क तिर्नु पर्दैन वा खोप प्रदायकले तपाईंलाई बिल पठाउन मिल्दैन । यो कुरा निजी बीमा, Apple Health (Medicaid), Medicare भएका वा बीमा नगरिएका मान्छेका हकमा लागू हुन्छ ।
बालबालिकामा COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउँदा सामान्यतया देखिने साइड इफेक्टहरू के के हुन्?
बच्चाहरूलाई COVID-19 लाग्दा हुने जोखिम खोप लगाउँदा हुने साइड इफेक्टको जोखिमभन्दा निकै बढी छ ।
अन्य खोपहरू जस्तै यसका सामान्य साइड इफेक्टहरूमा पाखुरा दुख्ने, थकान हुने, टाउको दुख्ने र मांसपेशी दुख्ने पर्छन् । यी लक्षणहरू प्रायः सामान्य हुन्छन् ।
क्लिनिकल ट्रायल (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) का क्रममा पहिलो डोज लगाउँदाभन्दा दोस्रो डोज लगाउँदा धेरै बालबालिकाले आफूमा साइड इफेक्ट देखिएको बताएका थिए । साइड इफेक्टहरू सामान्यतया हल्का र मध्यम खालका थिए र खोप लगाएको दुई दिनभित्र देखिएका थिए । धेरैजसो लक्षणहरू एक वा दुई दिनभित्र नै हराएर गएका थिए ।
Pfizer खोपमा के-कस्ता पदार्थहरू मिसाइएका छन् ?
Pfizer खोपमा पनि अन्य खोपमा जस्तै सामान्य पदार्थहरू मिसाइएका छन् । यो खोपमा mRNA को सक्रिय पदार्थका साथै फ्याट, साल्ट र सुगर जस्ता अन्य पदार्थहरू मिसाइएको हुन्छ । यी पदार्थहरूले उक्त सक्रिय पदार्थलाई सुरक्षित राख्न र शरीरमा अझ राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्छन् र खोप भण्डारण गर्ने र ढुवानी गर्ने क्रममा खोपलाई सुरक्षित राख्छन् ।
Pfizer ले विकास गरेको खोपमा मानव कोषिका (मृत भ्रूणका कोषिकासहित), COVID-19 सङ्क्रमण गराउने भाइरस, ल्याटेक्स्, प्रिजर्भेटिभ वा सुँगुरको उत्पादन वा जेलेटिनलगायतका जनावरका बाइ-प्रोडक्टहरू मिसाइएको हुँदैन। खोपहरू अण्डामा राखेर बनाइएको हुँदैन र यसमा अण्डामा हुने कुनै पनि पदार्थ मिसाइएको हुँदैन ।
तपाईं खोपमा मिसाइएका पदार्थका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रश्नोत्तर; Children's Hospital of Philadelphia (Philadelphia को बाल अस्पताल) को यो वेब पेज (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) हेर्नुहोस् ।
मेरो बच्चाले कुन ब्रान्डको खोप लगाउन सक्छन् ?
5 वर्षदेखि 17 वर्षका बालबालिकाका लागि Pfizer-BioNTech (Pfizer) ले विकास गरेको COVID-19 विरुद्धको खोप मात्र लगाउने अनुमति दिइएको छ । हाल 18 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूका लागि COVID-19 विरुद्धको अन्य कुनै खोप स्वीकृत गरिएको छैन ।
मेरो बच्चालाई बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ ?
हाल5वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूलाई मात्र बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । 17 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका मान्छेहरूले Pfizer खोपको बुस्टर डोज मात्र लगाउन पाउँछन् ।
मेरो बच्चालाई कति डोज खोप लगाउनु पर्छ ?
सबै बालबालिकालाई कम्तीमा 2-डोज लगाउन सिफारिस गरिन्छ। सुरक्षित रहिरहनका लागि थप डोजहरू सिफारिस गर्न सकिन्छ।
5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरूलाई पिडियाट्रिक डोज लगाइन्छ, जुन किशोरकिशोरी र वयस्कहरूलाई लगाइने डोजभन्दा फरक हुन्छ।
12 देखि 17 वर्षका बालबालिकाहरूले किशोरकिशोरी/वयस्कले लगाउने डोज लगाउन सक्छन् ।
5 वर्ष र माथिका बच्चाहरू जो मध्यम वा गम्भीर रूपमा इम्युनोकम्प्रोमाइज भएका छन् उनीहरूले दोस्रो इन्जेक्सन पछि 28 दिन पछि अतिरिक्त प्राथमिक खुराक प्राप्त गर्नुपर्छ र5वर्ष वा माथिका बालबालिकाहरूले बूस्टर खुराक प्राप्त गर्नुपर्छ। भविष्यमा, मानिसहरूका अन्य समूहहरूलाई थप खुराकहरू सिफारिस गर्न सकिन्छ।
मसँग खोपका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न भएमा म कोसँग कुरा गर्न सक्छु ?
आफ्नो बच्चाको चिकित्सक वा अन्य विश्वसनीय चिकित्सा प्रदायक वा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस् वा www.CovidVaccineWA.org मा दिइएको जानकारी पढ्नुहोस् ।
5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकालाई दिइने खोप र 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेलाई दिइने खोप एउटै हो ?
5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकालाई लगाइने Pfizer-BioNTech ले विकास गरेको खोपमा पनि उही पदार्थहरू समावेश गरिएको छ तर यो डोज सानो छ, अर्थात् किशोरकिशोरी र वयस्कले लगाउने डोजको एक तिहाई मात्र छ ।
वयस्क र किशोरकोशोरीलाई हल लगाइँदै गरेको खोप5वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकामा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
मैले आफ्नो बच्चालाई खोप लगाउन कहाँ लैजानु पर्छ ?
वासिङ्टन राज्यले 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई सिफारिस गरिएका सबै खोपहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ। आफ्नो बच्चाको चिकित्सक वा आफ्नो नियमित क्लिनिकको चिकित्सकलाई त्यहाँ बच्चालाई COVID-19 विरुद्धको खोप लगाइन्छ कि लगाइँदैन भनी सोध्नुहोस्।
स्वास्थ्यसेवा प्रदायक नहुने परिवारहरूले स्वास्थ्यसेवा प्रदायक, क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी स्रोतहरू फेला पार्नका लागि Help Me Grow WA हटलाइन 1-800-322-2588 लाई फोन गर्न वा ParentHelp123.org (अङ्ग्रेजी र स्पेनी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) मा जान सक्नुहुन्छ। यो सेवा निःशुल्क पाइन्छ र भाषिक सहायता उपलब्ध छ।
तपाईं VaccineLocator.doh.wa.gov मा गई फिल्टर प्रयोग गरेर आफ्नो नजिकै रहेका पिडियाट्रिक खोप लगाइने ठाउँहरूको सूची हेर्न पनि सक्नुहुन्छ।
मेरो बच्चाले फ्लू जस्ता बिमारीको खोप लगाउँदा COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन सक्छन् ?
अँ, सक्छन् । तपाईंको बच्चाले अन्य खोप लगाउँदा सङ्गै COVID-19 विरुद्धको खोप पनि लगाउन सक्छन् ।
तपाईं आफ्नो बच्चालाई COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउनका लागि अपोइन्टमेन्ट लिँदा स्कुल जानका लागि अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने खोप (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) वा सिफारिस गरिएका अन्य खोपहरू लगाउने अपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो बच्चाको COVID-19 विरुद्धको खोपको अपोइन्टमेन्टलाई उनलाई सिफारिस गरिएका अन्य खोपहरू लगाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ ।
मेरो बच्चाले बाल स्याहार वा दिवाकालीन क्याम्पमा जानका निम्ति अनिवार्य रूपमा COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ ?
स्कुल र बाल स्याहारका लागि कुन खोप अनिवार्य गर्ने भन्ने कुरा Washington State Board of Health (यो लिंक क्लिक गर्दा खुल्ने वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) ले तय गर्छ । अहिले स्कुल वा बाल स्याहारका लागि COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य गरिएको छैन ।
दिवाकालीन क्याम्पका हकमा भने उक्त क्याम्प आयोजना गर्ने संस्थाले तोकेका मापदण्डहरू थाहा पाउन उक्त संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस् ।